Pirezidaantiin Afriikaa Kibbaa Raamafoosaan walakkaa miindaasaanii arjooman - BBC News Afaan Oromoo
Pirezidaantiin Afriikaa Kibbaa Raamafoosaan walakkaa miindaasaanii arjooman
Siiriil Raamafoosaan caasaa daldalaa keessatti beekamoodha
Pirezidaantiin Afriikaa Kibbaa Siiriil Raamafoosaan miindaa argatan keessaa walakkaa Dhaabbata Tola Ooltummaa Mandeellaaf akka arjooman beeksisan.
Murteen Obbo Raamafoosaan kun tujaaronni biyyattii deggersa maallaqaa gochuun ijaarsa biyyaa keessatti ga'eesaanii akka gumaachan onnachiiseera.
Maallaqi Doolaara Ameerikaa kuma 130 Obbo Raamafoosaan arjooman kun harka dhaabbata gargaarsa Neelsan Mandeellaa Faawundeeshin jedhamu gala.
Pirezidaanti Raamafoosaan maallaqa Doolaara Ameerkaa miiliyoona 450 qabaachuudhaan tujaarota biyyattii keessatti ramadamu.
Qeeqxonni Obbo Raamafoosaa garuu warra harka qalleeyyii qoollifatu jechuun komatu, kan isaan bara 2012 keessaa caalbaasii gafarsaa fi ilmoo gafarsaa irratti maallaqa Doolaara Ameerkaa miiliyoona 2n hirmaatanfaa baayyee qeeqan.
Maanguddoon waggaa 65 Obbo Raamafoosaan bara 2012 Pirezidaantii Itti Aanaa ta'uusaaniitiin dura daldalaa jabaa turan.
Murtee Raamaafoosaarratti namoonni maal jedhu?
Siiril Raamafoosaan lammiilee Afriikaa Kibbaa galii giddu galeessaa qaban biratti baayyee jaallatamu
Gariin anmootaa wanti isaan arjooman qabeenya isaaniitiin wal bira qabamee yoo ilaalamu waan xiqqoodha jedhu, warri kaan ammoo murteen kun seenaa Paartii Kongiresa Biyyaalessaa Afriikaa Kibbaa keessatti waan hin baratamneedha, kanaafuu jalqabbii jajjabeeffamuu qabuudha jedhu.
Roobii darbe paarlaamaa biyyattiirratti wayita dubbatan, murteen isaanii yaadannoo gooticha dimokiraasii Neelsan Mandeellaa fi hojii gaarii isaanii yaadachiisuuf akka ta'e ibsaniiru Obbo Raamafoosaan.
Pirezidaanti Raamafoosaan ,wayita aangoo Pirezidaantummaa Pirezidaantii duraanii Jaakoob Zuumaarraa fudhatan duudhaan malaammaltummaa kan yeroo dheeraaf sirna bulchiinsaa Jaakoob Zuumaa jalatti kuufame qormaata itti ta'a jedhamee sodaatamaa turus, isaan nama maallaqa barbaadan waan hin taaneef akka to'atan dubbatanii turan Ministirri Dhimma Qabeenya Uumamaa Biyyattii Gwede Mantashe.
Hooggantoonni haala arjooman eenyufaadha?
Pirezidaanti Doonaaldi Tiraampi miindaasaanii waggaa doolaa Ameerkaa 400,000 sagantaalee garagaraaf arjoomaniiru.
Pirezidaantiin Laayibeeriyaa Joorji Weah miindaa argatan keessaa harka 25 jechuun doolaara Ameerkaa 100,000 misoomaaf akka oolu murteessaniiru.
Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammaduu Buhaarii wayita bara 2015 aangoo qabatan, miindaasaaniirraa harki 50ni akka citu murteessanii turan.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadmiir Putiin ammoo dhibbeentaan kudhan miindaarraa akka citu murteessanii turan.
Tiraamp ce'umsi aangoo gara Baayidan akka eegalu tole jedhan
Yeroo dhuma kan haaromfame: 30 Hagayya 2018
Barsiiftuu badhaasa barsiisotaa dolaara miiliyoona tokko argamsiisuuf kaadhimamte
Hogganaa milishaa Kongoo hidhaa umrii guutuu itti muran